I-Przystanek Tykocin-izindlu entliziyweni yePodlachia
Indlu esemaphandleni yonke sinombuki zindwendwe onguEdward
I-Przystanek iTykocin zizindlu ezi-4 ezipholileyo ezilungele ukuhlala usapho lwakho. Izindlu zixhotyiswe ngokupheleleyo, zinekhitshi nazo zonke izixhobo, indlu yangasese eyongezelelweyo, isauna eyomileyo yaseFinland kunye nePS3 console.
Ungakonwabela ubumfihlo kwindawo yaseTykocin, egcwele ulwakhiwo olukhulu lwe-baroque kunye neendawo zokundwendwela.
Zive usekhaya. Zonke izinto eziyimfuneko zilapha: ikhitshi, intsimbi, iitawuli, isepha kunye neshampu. Ngaba ikho enye into efunekayo? Sitsalele umnxeba- siya kuzama ukwenza utyelelo lwakho lube lolwanelisayo kangangoko sinako!
Izindlu zimi kuphela kwiimitha ezingama-200 ukusuka kwisikwere esikhulu saseTykocin: Isikwere saseCzarniecki saziwa njengendawo ekhangeleka ngathi yintsomi eyathi yaxatyiswa ziimbongi ezininzi kunye namagcisa atyelela iTykocin.
Visit Przystanek Tykocin, houses in heart of Podlachia- amazing region of North East Poland.
Singabahlali kwaye iTykocin yidolophu encinci entle. Siza kudibana nawe xa ufika okanye sabelane nawe ngeenkcukacha zezitshixo. Nceda usitsalele umnxeba okanye usibhalele ngaphambi kokufika.